‘शत्रु गते’ को ‘रुपै मोहनी’ सार्वजनिक | Rajmarga
‘शत्रु गते’ को ‘रुपै मोहनी’ सार्वजनिक
महसञ्चारको प्रस्तुति तथा प्रदीप भट्टराईको निर्देशन रहेको सिनेमा‘शत्रु गतेमा समावेश ‘रुपै मोहनी’बोलको गीत आज शुक्रबार सार्बजनिक गरिएको छ ।
पुल्चोकको ब्रिक्स क्याफेमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी शुक्रबार दिउँसो १ बजेर ३ मिनेट जाँदा उपस्थित कलाकार र पत्रकारलाई गीत देखाईयो भने यसै समयमा रेडियो अडियोले पनि अडियो सार्वजनिक गरेको थियो । युट्युबमा भने दिउँसो २ बजेर ३५ मिनेट जाँदा ओ एस आर डिजिटल युट्युब च्यानलमार्फत गीत सार्वजनिक गरिएको हो । छायाँङकनकै समयदेखि चर्चामा रहेको यो गीत बहुप्रतिक्षीत बनेको थियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा दर्शक श्रोताहरुले उक्त गीत हेर्न ब्यग्रता पुर्वक प्रतिक्षा गरिरहेको प्रतिकृया दिइरहेको बेला निर्माण पक्षले गीत सार्वजनिक गरेको हो ।
सिनेमाको यो गीतको छायाँङकनमा तीनदिन समय र झण्डै १५ लाख खर्च भएको निर्देशक भटटराईले जानकारी दिएका छन ।
गीतकार लोकराज अधिकारीका शब्द र टंक बुढाथोकीको संगीत रहेको यस गीतमा टंक बुढाथोकी र मिना निरौलाको स्वर रहेको छ । गीतमा हरिवंश आचार्य, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, आँचल शर्मा, पल शाह, शिवहरी पौड्याल, बसुन्धरा भुसाल लगायतलाई फिचर गरिएको छ । गीतको कोरियोग्राफी कविराज गहतराजले गरेका हुन ।
किरण केसीले १६ वर्षपछि निर्माण गरेको ‘शत्रु गते’को वीरगंजमा १७ दिन र काठमाण्डौमा सिनेमाको ४० दिनभन्दा बढि छाँयाकंनको लागि छुट्याईएको थियो । यसै शेड्युल अनुसार सिनेमाको छाँयाकंन भएको हो ।
यस सिनेमामा हाँस्य कलाकारहरु को बाहुल्यता भएका कारण सिनेमा हेर्न धेरै उत्साहित भएका छन् । शत्रुहरुलाई परास्तगर्ने विशेष एक दिनमा‘शत्रु गते’ केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
‘शत्रु गते’मा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, आँचल शर्मा, पल शाह, किरण केसी, राजाराम पौड्याल, बसुन्धरा भुसाल शिवहरी पौड्याल, लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका छ । सिनेमाले चैत्र ९ गतेलाई आफ्नो प्रदर्शन मिति तोकेको छ ।
Previous post: पूर्वाधार विकासमा ढिला सुस्ती : राजनीतिक नेतृत्वको विचार माग
Next post: कस्को नयनमा हराइन् प्रशना ?
काली भन्या छैन भन्दै पुष्प र भावनाको अनस्क्रिन रोमान्स
अनौठो घटना पछी रबिको बिनम्र अनुरोध
श्रीदेवीको पुनर्जन्म, आखिर कहाँ पुनर्जन्म लिइन त ? [भिडियो सहित ]
लिलिबिली प्रमोशनमा व्यस्त सोनीका(फोटो फिचर)